Guyyaan isaa sadasaa 13 -3-2018 ture, Magalaa Ciroo keeysaatti waan ni taha je’ame hin yaadaminiitu tahee nu naasise. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGuyyaan isaa sadasaa 13 -3-2018 ture, Magalaa Ciroo keeysaatti waan ni taha je’ame hin yaadaminiitu tahee nu naasise.
Guyyaan isaa sadasaa 13 -3-2018 ture, Magalaa Ciroo keeysaatti waan ni taha je’ame hin yaadaminiitu tahee nu naasise.
Namooni Adem Mohammed Hasaan ykn Adem Biyye Hasaan ( Adem Damiina) ukamasiisaann ittigaafataman Poolisii goodinaa Ciroo Obboo Allamayyo Kana jedhamu fi Kaanattibaan magalaa ciroo Obboo Abdissaa Ahmed kana jedhamu suraa asii gadiiti agartan kun kana Kantibbaa magalaa cirooti Nama Obbolessa Kenyaa Ukamasiisee keessaa isa tokko Obboo Abdisaa Ahmed jedham
Breaking_News #ATM_Group#QEERROO_GODINA_HARARGEE_LIXAA_MAGAALAA_CIROO IRRAA.
Wanti tahe Kuniis Maali jechuun keeysan hin Oolamu, ee inniis Maali yoo jettan, Obboo Aadam Mohammed Hassan ykn Aamdam Biyyee je’amuun beekkama.
Aadam Kan dhalatee Aanaa Ciroo Waaccuu bakka ja’amtutti hoggaa tahu Dhiibbaa Motummaa wayyaaneetiin biyyaa irraa bahee biyyaa Ollaa magalaa Nairobi jiraacha Ture.
Erga Magaalaa Nairobi irraa gara biyya isaatti galee Waggaa 3 ni taha. Eega Biyya Abbaa Isatti deebi’e boodaas Jaalala ummanni isaa Qabu irraa kan ka’e Ummaani akka inni Bulchaa Araddaa magalaa ciroo Ganda 03 bulchuuf fedhii ummataatiin carraan keenameef.
Inniis fedhi isaa irraa dhaabbachudhaan kan Ummata isaa dursee Magaalaa Ciroo aradda 03 Bulchuu eegale. Sirna bulchisaa keessaati jaalalii ummanni isaaf Qabu Dabalaa dhufee Hojii Isa keessaatti haattonni ummata saamaa turan akka ummata hin saamne fii Yeroo Qamoonni Motummaa Qeerroo adamsuuf gaafatan isaan dhoorkaa ture.
Bifa kanaan ji’aa 4 Bulchaa osoo jiruu guyyaa 13/3/2011 akka Lakkoofsa Itoopgiyaatti Qaamonni Mootummaa Olanoo Oromiyaa irraa dhaamsi tokko Nutti Dhufee jechuudhaan itti gaafatamaan Poolisii Godina Ciroo Obboo Alamayyoo namni ja’amu fii Kantiibaan Magaalaa Ciroo Obboo Abdiisaa Ahmed kan je’aman, Obbo Aadam M/D Ykn Aadam Biyyee akka Bira dhufanii waliin marihatan itti himanii yaaman.
Aadam Haya je’e Yaaminsa isaanii khabajee erga itti dhufee booda isaaniis fuudhanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa akka ati walgahii Oromiyaa irratti Hirmattuuf Obboo Addisu Arega Kitessa Bilbilee nutti hime je’anii Akka Aadam Biyyee walgahii Deemuuf Gaafatanii turan. Obboo Aadamiis tole ergs je’een booda, Qamoonni biraa kan hin beekamne nutiis harargee bahaa irraa deemaa jirraa atiis Qophaawi waliin deemnaa je’aniinii turan.
Obboo Adamiis tole je’eenii ture, Nama Oromiyaa irraa kara Magaalaa Ciroo dhufee tokko waliin namoota Nutiis harargee bahaatii dhufaa jirra ja’aniin san wajjiin karaa Magaalaa Adaamaa Imala eegalan. Aadam biyyee akkuma Magaalaa Adaamaa seeneen Bilbilee Magaalaa Aadamaa seenuu isaa hiriyoota isaatti himee Ture.
Garuu achi booda dubbiin ni jijjiramte. Bilbilli isaa hin hojjattu. Amma eega dhabamee guyyaa 9 gehee jira. Namaa sabaaf hojjachaa jiru Magaalaa Ciroo keesaaa walgahii dhufuu Qabda ja’aniinii Qamoota Motummaa olaanoo fi bulchinsi Aanaa Cirootii fii itti gaafatamaan Poolisii godina Ciroo, Akkasumaas Kantibaan magaalaa Ciroo walii galanii, waliis tahanii Humna tika Mootummaa akka nama barumsa kennuufii deemanii fakkeessanii Obboo Aadem Mohammed Hasaan ykn Adem Biyye (Damiinaa) Achi buutee Miila Bakar Waaree Godhan.
Obbo Aadam Biyyee efa Qaama Motummaa humna Tikatiin butamee irraa kaasee hamma ammaatti bilbilli isaa hin hojjatu. Obbo Aadam Biyyee nama sabaaf hojjachaa jiru kan saamamuu ummata isaa tole hin janne tahuu ummata isaatu ragaa bahaaf. nama bayyee Ummataan jaalatamuudha. Qeerroon magaalaa Ciroo guyyaa kalee Namoota Obboo Aadam m/d Hassan ukkamsisan kantiibaa Magalaa Ciroo Obboo Abdisaa Ahmed fii Itti gaafatamaa poolisii Godina ciroo yeroo dhaqanii gaafatan Qaama Mootummaa federaalaatu yaame jechuun deebisaniif.
Guyyaa ar’aatiis gaafannan Mana hidhaa Jira je’anii nutti himan ja’an.
Yeroo hedduu nuti Osoo ajjeefamnuu, Osoo roorrifamnuu, Osoo Qa’ee teenyarraa humnoota hidhataniin buqqaafamnuu, Osoo beeyladoota keenya Saamamnuu Jijjiirama amma kanatti gufuu hin taanu jennee Callifne. Kun osoo kanaan jiru Gochi akkanaa yeroo dhalatu daran nu Muufachiise Mootummaan ammatti Furmaata nuuf haa godhuu jechuun Qeerroon godina Harargee Lixaa iyyannaa isaanii galfatan.
Dhugaa kuna waan nama rifachiisuu Qaaneysu waan taheef Qaamni Obbo Aadama fuutan hatattamaan deebisuu baannaan rakkoo dhalattuuf isaaniitu itti gaafatama.